Mvangan: shaqaalaha bulshada ee qalabka kombiyuutarada cusub - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY »Mvangan: shaqaalaha dawladda hoose ee qalabka kombiyuutarka cusub
TELES RELAY 16 June 2019
Seminar ah oo lagu xakameynayo silsiladaha kharashka ee ay abaabulaan maamulaha degmada ee Mvangan ayaa ku xirnaa Mvangan 14 June 2019. Kulanka tababarka wuxuu diirada saaray isticmaalka software maareynta maaliyadda ee maamulka degaanka.
Ujeedadu waxay ahayd in awood ka qaybgalayaasha dhamaan shaqaalaha degmada Mvangan inay ka adkaadaan circuit cuntada iyo kharashka. Fikradda Duqa Magaalada ee Mvangan waa in ay ka fogaadaan navigation muuqaal ah oo qasan ee maaraynta this si loo wanaajiyo qabashada of damaanad xisaabaadka dawladda hoose ee horumarinta.
Waayo, Thomas Minsili Eba Duqa degmada of Mvangan this waa fursad halis ah in maamulka degmada "mar hore bilaabay tababarka mab qaar ka mid ah, laakiin eeg fursadaha suurto gal ah ka hortagga. Waad og tahay in loox, kuwaas waxaa loo yaqaan in ay u adeegaan meel kasta oo Jamhuuriyadda si aad u leeyihiin in ay si deg deg ah ka heli workarounds. "
Wadaxaajoodka Mvangan wuxuu sii wadaa hannaankiisa habka casriga ah. Dib-u-habeyn istaraatiijiyadeed oo fursad u siinaysa ka qaybgalayaashu in ay helaan aqoon iyo ogaansho-siis loogu talagalay maareynta ugu wanaagsan ee ay wadaagaan. Waa su'aal ah in dibi ay ku qaadaan geesaha si ay u sii dhex galaan dabaysha baahinta xukunka. Sida laga soo xigtay Valère Akamse oo ah madaxa fulinta wada-jirka, "waa mashruuc aad u wanaagsan oo muujinaya farxada uu Duqa ku leeyahay qalbigiisa xirfad-u-qaadis shaqaalihiisa. Sannadkan si kastaba ha ahaatee, waqtigaa waa waqtigaa.
Wakiilada goobaha, kuwaas oo ah wadaadada wadaagga ah, ayaa sidaas darteed lagu qalabeeyay hababka maamul wanaagga si loo hubiyo joogtaynta adeegga dadweynaha.
Pär Consty ZANG Mvangan | Actucameroun.com
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/06/15/mvangan-le-personnel-communal-a-lecole-des-nouveaux-outils-informatiques/
Samuel Eto'o iyo garabyada naafada ah ee Douala
Laba Japan oo ku xayiray xawaaladda 45 G $ marka ugu horeysa ee la soo bandhigo: warbixinta
Ivanka Trump waxay u egtahay in ay ku jirto dhar midab cas oo dhar ah iyo kabaha shoogga - VIDEO
Peter Thiel, Xubin Guddiga Facebook, Wicitaanada Google Baaritaanka "Khasaaraha" - BGR
Dadka: Sida ilka madow: waxay u egyihiin sida Heidi Klum, 46 sano jir ah, ayaa 'seegay' habeenkiisii ​​qurxinta amfar
Switzerland: Credit Suisse oo baaritaan ku sameeynaya MPC oo ku taal Bulgaria "boqorka koda"
DADKA & LIFESTYLE4,141
Video dheeraad ah1,485